Ring osayizi wokubala inthanethi, wokubala inthanethi, converter
Ring osayizi wokubala inthanethi
Ring osayizi wokubala inthanethi ikuvumela ukuba uthole futhi ukuguqula ring osayizi American, British, Russian, ezinobukhulu Japanese, ububanzi ngamamilimitha kanye amasentimitha, noma umunwe selilonke.
Ring osayizi wokubala inthanethi ikuvumela ukuba uthole futhi ukuguqula ring osayizi American, British, Russian, ezinobukhulu Japanese, ububanzi ngamasentimitha and amasentimitha, noma umunwe selilonke. Ngokwesibonelo, ukuguqula ring ezinobukhulu kusukela American Russian, noma kusukela ububanzi umunwe selilonke. Futhi ungakwazi ukubona ring osayizi ishadi, ne osayizi ezinkulu nezincane.
Ububanzi (amayintshi) Ububanzi (kwangu) Finger selilonke Russian English (UK) American (USA) Japanese
Namasongo osayizi wokubala inthanethi
Inguqulela namasongo osayizi ukuba osayizi Russian futhi isandla selilonke ngamasentimitha noma amayintshi.
Gold nencane ukuze amagremu wokubala inthanethi
Inguqulela isisindo segolide kusukela troy namagremu kuya amagremu futhi kusukela grams kuya Troy ounces.
Gold karat wokubala inthanethi
Inguqulela amasampula zegolide phakathi carats, igolide kuyizimpawu noma amaphesenti egolide ubucwebe.
Iqukethe ezinkulu kanye nezincane ring osayizi ishadi emazweni ahlukene.